Mpaka sary izay hahatonga anao hanalavitra amin'ny fampiasana makro | Famoronana an-tserasera
Cristina Zapata | | sary
Sary nalain'i Levon Biss
Efa nahita mite amin'ny ambaratonga lehibe ve ianao? Fantatrao ve hoe manao ahoana ny firafitry ny volon'akanjonao? Tahaka ny ahoana ny mason'ny lalitra?
Ny fakana sary makro dia misy fakana sary zavatra kely dia kely, amin'ny fomba izay ahitantsika amin'ny an-tsipiriany ireo zavatra izay, amin'ny masontsika dia tsy afaka mamantatra isika. Ny tongotry ny vitsika, ny volon'ilay ravina zavamaniry, ny endrik'ireo felam-panala ... sy izay rehetra azo sary.
Inona no tokony hotadidintsika fa raha te hanao sary makrozy isika? Voalohany indrindra dia zava-dehibe ny fananana solomaso mety, ilay antsoina hoe solomaso makro. Izy io dia fitaovana fanampiny natao manokana hifantohana tsara amin'ny halavirana lava be, noho izany dia lafo matetika. Raha te-handroso bebe kokoa isika ary haka sary avo lenta, dia tsy maintsy manana tanjona makro lehibe (matetika eo anelanelan'ny 6x sy 10x fanamafisana), izay manana kalitao optika miavaka, tsy misy mikraoskaopy.
Avy eo isika dia hiresaka momba ny mpanakanto makro marobe efa nahazo laza manerantany noho ny sary tany am-boalohany sy mampiavaka an'izao tontolo izao izay manodidina antsika fa tsy hitantsika.
1 Andrey Osokin, ilay mpaka sary ny lanezy
2 Alberto Seveso, mpanakanto milalao amin'ny ranomainty
3 Sharon Johnstone, ilay mpanakanto ranonorana
5 Rosemary * sy ny sariny voninkazo
Andrey Osokin, ilay mpaka sary ny lanezy
Sary nalain'i Andrey Osokin
Raha tena misy sary makro mahavariana dia ireo no izy maneho ireo rafitra maro karazana sy saro-bidy ananan'ny hantsam-panala. Andrey Osokin dia mpaka sary makro rosiana izay mampiseho amintsika amin'ny pejiny fa mahavariana ity tontolo geometrika bitika ity. Azontsika atao ihany koa ny mahita ny sarin'ny fiainana be atao amin'ny vitsika na ny ranon'ando amin'ny maraina. Tena asan'ny zavakanto ireo.
Alberto Seveso, mpanakanto milalao amin'ny ranomainty
Sary nalain'i Alberto Seveso
Mpanakanto lehibe iray hafa amin'ny fakana sary makro ny Italiana Alberto Seveso, izay ny sariny no hahatonga antsika hanjoko amin'ny loko fa tsy hiteny intsony. Ao amin'izy ireo dia miavaka ny fampiasana ranomainty miloko amin'ny rano, izay nalaina tamin'ny fakantsary haingam-pandeha ny endriny. Ny asa tsirairay dia miavaka sy tsy mitovy, noho ny fiovaovan'ny loko sy ny endrik'ilay ranomainty.
Sharon Johnstone, ilay mpanakanto ranonorana
Sary nalain'i Sharon Johnstone
Raha misy mpaka sary iza miavaka amin'ny sary makro amin'ny ranonorana, tsy isalasalana fa ny anglisy Sharon johnstone. Ao amin'ny galeriany dia ahitantsika karazana sary maro an'isa, feno alahelo. Araka ny filazany hoe: Ny fakana sary makorera dia mamela ahy handositra any amin'ny tontolo kely hafa, maniry fatratra ny hianatra ny antsipirian'ny minitra omen'ny natiora aho. Tiako ny mahita loko tsara sy forongon-tsarimihetsika.
Ity mpaka sary anglisy ity mampiseho antsika bibikely manaitra amin'ny alàlan'ny makro amin'ny fakantsariny, mamorona Mikraoskaopy, portfolio manaitra ny sariny mahafinaritra, izay natao ho an'ny fandalinana siantifika ihany koa noho ny halalin'ireo rafitra asehon'izy ireo. Ho fanampin'izany, amin'ity portfolio ity, i Levon Biss dia manazava amintsika ny momba ny teknikan'izy ireo, izay tohanan'ny fampiasana microscope sy ny fakan-tsary matanjaka (36 megapixels, miaraka amina tanjona 10x, mifandray amina lens iray hafa mifantoka 200 mm) . Sary maro samihafa no alaina miaraka amin'ny elanelan'ny micron eo amin'izy ireo, rehefa mihetsika manaraka ny lalana elektronika ny fakantsary. Avy amin'ny sary farany an'ny bibikely (manodidina ny 8000) manodidina ny 30 ny fizarana mifantoka tsara nalaina, izay natambatra ho sary tokana noho ny Photoshop, amin'ny fomba izay mifantoka tsara sy miaraka amin'ny mazava mazava tsara ny antsipirian'ny bibikely rehetra. . Ny sary farany tsirairay dia asa kanto izay maharitra telo herinandro vao vita.
Rosemary * sy ny sariny voninkazo
Ity iray ity Mpaka sary Japoney tia voninkazo ary ny tonony mavokely, dia gaga izy tamin'ny sary makro izay sangan'asa kanto tena izy. Miaraka amin'ny tsiro mahafinaritra sy ny loko malefaka amin'ny voninkazo, ravina ary ny sary izay sariny, dia afaka nampita fiadanam-po sy filaminana lehibe izy. Fomba mahafinaritra iray hankasitrahana ny natiora manodidina antsika, amin'ny fijerena ireo antsipiriany kely izay mahatonga azy ho tena miavaka.
Ary ianao, sahy mandeha amin'ny tontolo kely ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Mpaka sary izay hahatonga anao hanalavitra amin'ny fampiasana makro